Gigi Hadid တဈယောကျ ကိုယျဝနျရှိနပွေီလား ? ? ? – SoShwe
Home/Entertainment/Gigi Hadid တဈယောကျ ကိုယျဝနျရှိနပွေီလား ? ? ?
Gigi Hadid တဈယောကျ ကိုယျဝနျရှိနပွေီလား ? ? ?
So Shwe April 30, 2020	Entertainment Leaveacomment
အသကျ၂၅ နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ ကမ်ဘာကြျောထိပျတနျးမျောဒယျ Gigi Hadid ဟာ သူ့ရဲ့ခဈြသူ Zayn Malik ရဲ့ ရငျသှေးဦးလေးကို လှယျထားရပွီဖွဈကွောငျး Gigi ရဲ့မိသားစုဝငျတဈဦးက ပွောပွလာခဲ့ပါတယျ။ ပိုပွီးအံ့သွစရာကောငျးတာကတော့ Gigi ဟာ Zayn ရဲ့ ရငျသှေးလေးကို လှယျထားရတာဟာ ရကျသတ်တပတျ ၂၀ ခနျ့ ရှိပွီဆိုတာပဲဖွဈပါတယျ။
ပထမပိုငျးမှာတော့ ဒီသတငျးက သတငျးအမှားလို့ လူတှကေထငျခဲ့ကွပမေယျ့ မကွာသေးခငျမှာ Gigi ရဲ့ အမဖွေဈသူ Yolanda Hadid က သမီးဖွဈသူရဲ့ ပထမဦးဆုံးသောရငျသှေးနဲ့ ပတျသကျပွီး ခြီးမှမျးစကားဆိုခဲ့ကာ Gigi ရဲ့ ရငျသှေးလေးဟာ မိနျးကလေးဖွဈကွောငျး မြှဝပွေောပွခဲ့ပါတယျ။
Gigi နဲ့ Zayn တို့ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ စတငျတှဲခဲ့ပွီး ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာတော့ လမျးခှဲခဲ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး သိပျမကွာခငျမှာပဲ နှဈဦးသားဟာ ပွနျတှဲနပွေီဖွဈကွောငျး မွငျတှလေ့ာရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Gigi က ခဈြသူမြားနမှေ့ာ Zayn ရဲ့ ဓာတျပုံကို သူ့ရဲ့အငျစတာဂရမျအကောငျ့မှာ တငျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးခငျကမှကငျြးပခဲ့တဲ့ အသကျ၂၅ နှဈပွညျ့မှေးနပှေဲ့နဲ့ ပတျသကျပွီးတော့လညျး Gigi က သူ့ရဲ့အငျစတာဂရမျအကောငျ့မှာ “ကငျြးပခဲ့ဖူးတဲ့ မှေးနပှေဲ့တှထေဲမှာ၂၅ နှဈပွညျ့မှေးနပှေဲ့က သူ့ကိုအပြျောရှငျစဆေုံး” ဆိုပွီး ရေးသားဖျောပွခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ COVID-19 ကွောငျ့ အိမျတှငျးမှာပဲနရေပမေယျ့ မှေးနပှေဲ့ကို မိသားစုဝငျတှေ ခဈြခငျရသူတှနေဲ့ ကငျြးပခဲ့ရတာကွောငျ့ Gigi တဈယောကျ စိတျပေါ့လကျပေါ့နဲ့ ပိုပွီးပြျောရှငျနရေတယျဆိုတာကိုတော့ ငွငျးစရာမလိုပါဘူးနျော။
Gigi က Zayn ရဲ့ရငျသှေးလေးကို လှယျထားရပွီဖွဈကွောငျးကို မိသားစုဝငျတှနေဲ့ အရမျးရငျးနှီးတဲ့ မိတျဆှေ၊ သူငယျခငျြးတှကေိုသာ အသိပေးထားခဲ့ပါတယျ။ အခုခြိနျမှာတော့ မင်ျဂလာရှိတဲ့သတငျးလေးဟာ ကမ်ဘာတဈဝှမျးကို ပြံ့နှံ့သှားပွီဖွဈတာကွောငျ့ Gigi နဲ့သူ့ရဲ့ရငျသှေးလေး ကနျြးမာဖို့ပဲဆုတောငျးပေးရပါမယျ။
Zayn ရဲ့ မိသားစုဝငျတှနေဲ့ Gigi ရဲ့မိသားစုဝငျတှဟောလညျး ဒီသတငျးကွောငျ့ ပြျောရှငျကွညျနူးနရေကွောငျး မိသားစုဝငျတဈဦးက ထုတျဖျောပွောပွခဲ့ပါတယျ။
Gigi Hadid တစ်ယောက် ကိုယ်ဝန်ရှိနေပြီလား ? ? ?
အသက်၂၅ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကျော်ထိပ်တန်းမော်ဒယ် Gigi Hadid ဟာ သူ့ရဲ့ချစ်သူ Zayn Malik ရဲ့ ရင်သွေးဦးလေးကို လွယ်ထားရပြီဖြစ်ကြောင်း Gigi ရဲ့မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ပိုပြီးအံ့သြစရာကောင်းတာကတော့ Gigi ဟာ Zayn ရဲ့ ရင်သွေးလေးကို လွယ်ထားရတာဟာ ရက်သတ္တပတ် ၂၀ ခန့် ရှိပြီဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပထမပိုင်းမှာတော့ ဒီသတင်းက သတင်းအမှားလို့ လူတွေကထင်ခဲ့ကြပေမယ့် မကြာသေးခင်မှာ Gigi ရဲ့ အမေဖြစ်သူ Yolanda Hadid က သမီးဖြစ်သူရဲ့ ပထမဦးဆုံးသောရင်သွေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ချီးမွမ်းစကားဆိုခဲ့ကာ Gigi ရဲ့ ရင်သွေးလေးဟာ မိန်းကလေးဖြစ်ကြောင်း မျှဝေပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Gigi နဲ့ Zayn တို့ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ စတင်တွဲခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာတော့ လမ်းခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း သိပ်မကြာခင်မှာပဲ နှစ်ဦးသားဟာ ပြန်တွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်း မြင်တွေ့လာရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Gigi က ချစ်သူများနေ့မှာ Zayn ရဲ့ ဓာတ်ပုံကို သူ့ရဲ့အင်စတာဂရမ်အကောင့်မှာ တင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးခင်ကမှကျင်းပခဲ့တဲ့ အသက်၂၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း Gigi က သူ့ရဲ့အင်စတာဂရမ်အကောင့်မှာ “ကျင်းပခဲ့ဖူးတဲ့ မွေးနေ့ပွဲတွေထဲမှာ၂၅ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပွဲက သူ့ကိုအပျော်ရွှင်စေဆုံး” ဆိုပြီး ရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် COVID-19 ကြောင့် အိမ်တွင်းမှာပဲနေရပေမယ့် မွေးနေ့ပွဲကို မိသားစုဝင်တွေ ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ ကျင်းပခဲ့ရတာကြောင့် Gigi တစ်ယောက် စိတ်ပေါ့လက်ပေါ့နဲ့ ပိုပြီးပျော်ရွှင်နေရတယ်ဆိုတာကိုတော့ ငြင်းစရာမလိုပါဘူးနော်။
Gigi က Zayn ရဲ့ရင်သွေးလေးကို လွယ်ထားရပြီဖြစ်ကြောင်းကို မိသားစုဝင်တွေနဲ့ အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေကိုသာ အသိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ မင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းလေးဟာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကို ပျံ့နှံ့သွားပြီဖြစ်တာကြောင့် Gigi နဲ့သူ့ရဲ့ရင်သွေးလေး ကျန်းမာဖို့ပဲဆုတောင်းပေးရပါမယ်။
Zayn ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေနဲ့ Gigi ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာလည်း ဒီသတင်းကြောင့် ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေရကြောင်း မိသားစုဝင်တစ်ဦးက ထုတ်ဖော်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
Source ~ Unilad
Previous အိန္ဒိယစမတ်ဖုန်းဈေးကွက်၌ Samsung ကို ကျော်တက်သွားသည့် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခု။
Next တရုတျအစိုးရကို အမရေိကနျပွညျထောငျစုသမ်မတ Donald Trump က အမကျြတျောရှရတဲ့အကွောငျးအရငျး။
ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ Keanu Reeves နဲ့ Winona Ryder တို့နှဈယောကျရဲ့ မင်ျဂလာပှဲအစဈအမှနျနဲ့ ပတျသကျလို့ ပရိသတျတှအေားလုံး အံ့အားသငျ့သှားစမေယျ့အကွောငျးအရာတခုကို Reeves က ထုတျဖျောဝနျခံလိုကျပွီ ဖွဈပါတယျ။ …